पहिलो नारी दिवसको नारा के थियो ? - Sankalpa Khabar
काठमाडौं । वर्षका हरेक दिनमा महिलाको हक हितको बारेमा कुरा गरेको त सबैले सुन्नु भएकै होला । आज अर्थात् मार्च ८ का दिन विशेष नारीहरूके लागि छुट्टाइएको दिन हो। अझ वर्षको ३ सय ६४ दिन पुरूषलाइ आजको एक दिन महिलालाइ भनेर व्यङ्ग्य पनि गरिन्छ । हुनत सधैं दबिए र थिचिएर बसेकि नारीलाइ एक दिनले के पो न्याय दिन सक्छ र तर पनि यस दिनलाइ खास मान्नेहरूके कमी छैन।
अाउनुस् जानाैं कसरी सुरू भयो त नारी दिवस ? के थियो पहिलो नारा ?
सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९९० देखि मनाउन सुरु गरिएको हो । यद्यपी, यसले आधिकारिक मान्यता सन् १९७५ मा पायो । यस्तै, यही वर्षदेखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले एक ‘थीम’ सहित यसलाई मनाउन सुरु गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सबैभन्दा पहिलो थीम ‘सेलिब्रेटिङ द पास्ट, प्लानिङ फर द फ्युचर’ राखियो । हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन एक विशेष थीम राखिन्छ । यस वर्षके नारा चुनौती दिने रोजाइ लेउ रहेको छ ।
सन् १९०९ मा अमेरिकाकी सोशलिस्ट पार्टीले यूनाइटेड स्टेट्समा पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस २८ फेब्रुअरीमा मनायो । त्यसपछि १९ मार्च १९११ मा पहिलो पटक अष्ट्रिया, डेनमार्क र स्विटजरल्याण्डमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो ।
अर्को तथ्य अनुसार सन् १९०६ मा सम्पन्न महिलाहरूको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट क्लारा जेट्किन सेक्रेटरी भइन् । त्यसपछि १९०८ मार्च ८ को दिन अमेरिकाको सिकागो सहरमा समान अधिकारको माग अघि सारेर महिलाहरूले हड्ताल र विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । यसै दिनलाइ अहिले सम्म नारी दिवसके रूपमा मानिँदै अइएके छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस संसारभरीका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धीलाई स्मरण गर्दै मनाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिलालाई सम्मान दिनुका साथै महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक असमानतालाई घटाउने उद्देश्यसहित मनाइन्छ ।
नेपालले यस वषके नारा यस वर्ष ‘महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ महिला दिवस मनाइँदै छ । नेपालले पनि मार्च ८ लाइ नै राष्ट्रिय नारी दिवसके रूपमा मनाउँछ । यस दिन महिलाहरूके लागि सार्वजानिक विदा समेत दिने गरेके छ ।
निमाको ‘हेर्देउन मायाले’मा तक्मे बुडा र रजनीको रोमान्स
१ बैशाख १५:१७
तस्बिरमा हेर्नुहाेस् घाेडेजात्रा
२९ चैत्र १८:१९